3 पारिस्थितिक र लक्जरी रिसोर्टहरू यात्रा समाचार
3 पारिस्थितिक र लक्जरी रिसोर्टहरू
मारिएला क्यारिल | | आवास, यात्रा
म करोडपतिहरू ईर्ष्या गर्दछु तर उनीहरूले किन्न सक्ने चीजहरूको लागि होइन तर उनीहरू बाँच्न सक्ने अनुभवहरूको लागि। त्यहाँ ठाउँहरू छन् जुन केवल पैसाले तपाईंलाई लिन सक्दछ र रिसोर्टहरू जुन आज हाम्रो पोष्टको तारा हुन् एक राम्रो उदाहरण हो।
उनीहरूमा एक रात खर्च गर्न धेरै पैसा खर्च हुन्छ, खान देऔं र तिनीहरूको सबै सेवाहरू प्रयोग गरौं। त्यहाँ कुनै बचतहरू छैनन् जुन उनीहरूले खर्च गर्न सक्दछन् तर तिनीहरू अवस्थित छन् र त्यहाँ संसारमा व्यक्तिहरूको सानो समूह छ जसले तिनीहरूलाई मजा लिन सक्दछ। हामी तिनीहरूलाई कम्तिमा यति मध्य जाडोमा भेट्न सक्दछौं र गर्मी बिदाको बारेमा सोच्दै यहाँ तीन छन् पारिस्थितिक र सुपर लक्जरी रिसोर्ट्स।
1 Panchoran रिट्रीट
2 सोनेवा किरी
3 वाडी रम मरुभूमि रिसोर्ट
यो रिसोर्ट बालीमा छ, ज of्गलको बीचमा र उबुदको नजिक। यसको वास्तुकला प्रकृतिबाट प्रेरित छ र यो डिजाईनबाट सब भन्दा चाखलाग्दो ठाउँहरू मध्ये एक हो किनकि बाहिरी भाग भित्री भन्दा प्रायः फरक छैन र त्यो अद्भुत छ। यो पनि संग बनेको छ टिकाऊ सामग्री र कम्प्लेक्स छ वटा घरहरु बाट बनेको छ जुन बाँस ग्रोवमा हराएको छ।
सम्पत्ति वास्तवमै ठूलो छ र आयरिश परिदृश्य र भित्री डिजाइनरसँग सम्बन्धित छ प्यारा माला। वास्तवमा यो उसको आफ्नै घर थियो, जबसम्म यसमा परिमार्जन नभएसम्म यसमा बस्दै आएका थिए। बाँसबाट प्रेरित भएर उनले निर्णय गरे कि उनी सकेसम्म यति गर्न चाहन्छन्, त्यसैले यो भनिन्छ कि यहाँका भवनहरूमा खास स्थानीय घर भन्दा बढी बाँस छ किनकि फ्लोर र भाँडा पनि बाँसले बनेको छ। बाँसका करिब २०० प्रजातिहरू छन् र यो विचार वास्तुकला र सजावटमा वैकल्पिक काठको रूपमा यसको प्रयोगलाई बढावा दिन हो।
मुख्य घर, बाला गेडेयो एक आउटडोर भोजन कोठा र एक सांप्रदायिक बैठक कोठा छ कि जंगल मा खुल्छ र बाँस झूमर संग सजाइएको छ, उदाहरण को लागी। प्रत्येक विला, कलहरू झरना, कोको, बाँस, नदी घर, एक सानो नदी overlooks रमाईलो वनस्पति को पहाड मा टिका छ। दृश्यहरू धेरै रमाईलो छन् किनकि उनीहरूसँग बालकनीहरू छन्। केहि एक शयनकक्ष छन्, अरू तीन बेडरूम र केहि 20 मान्छे समायोजित गर्न सक्छन्।
आन्तरिक सजावट अनुसरण गर्दछ जथाभावी ठाँउ शैली आजको दिन यति लोकप्रिय बगहरू र लामखुट्टेहरू (वनस्पतिहरू जस्तै विलाका चारै तिर लागेका बिरूवाहरू, जाभेनी काठ प्यानलिंग ...
आधुनिक सर्तमा प्रत्येक विलासँग हुन्छ एयर कंडीशनिंग र छत प्रशंसकहरू, एक सुसज्जित भान्छा, लक्जरी ओछ्यान र लिनन, र एक जाकुजी।
राति नरिवलले बनेका अनगिन्ती तेल बत्तीहरू प्रज्ज्वलित हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, परिणाम यस्तो अनौंठो छ कि अहिले मैले पैसा बचत गर्न थाल्छु ...
यो लक्जरी रिसोर्ट थाईल्याण्ड मा छ र यसले पुरानो हावालाई संरक्षण गर्दछ जुन देशले केहि दशक पहिले प्रयोग गर्‍यो। यो बैंककबाट एक घण्टा उडान हो, तर एक निजी उडान। यो एक सपना समुद्र तट मा, एक वर्षा वन मा स्थित छ। यो एक को बारे मा छ आफ्नै पोखरीको साथ निजी विलाहरूको जटिल, इलेक्ट्रिक बग्गीहरू ताकि तपाईंको पाहुनाहरूले धेरै हिंड्नुपर्दैन र लक्जरी, लक्जरी, विलासिता।
त्यहाँ छन् बाह्र भिल्ला समग्र, एक भन्दा अर्को सुन्दर। कसैको छ बेडरूम छन् र समुद्रमा हेर्छ, कसैसँग कम बेडरूमहरू हुन्छन् र इकोलोजिकल रिजर्भलाई हेर्दछन्, अरूसँग दुई वा तीन बेडरूम हुन्छन् र सब भन्दा सानोमा पनि एउटा बेडरूम हुन्छ यद्यपि यसले measures०403 वर्ग मीटर भन्दा कम मापन गर्दैन। सबै जनासँग छ खुला हावा स्नान, सपना पोखरी, समुद्र तट पहुँच...
रिसोर्ट द्वारा प्रस्ताव गरिएका सेवाहरू पनि उत्कृष्ट छन्। हराइरहेको छैन स्पास्पष्ट रूपमा, तर यसले एक जोड्दछ बाहिरी सिनेमा र सिनेमा प्याराडिसो नामका ताराहरू अन्तर्गत जुन गउरमेन्ट डिनर समावेश गर्दछ, त्यहाँ एक पनि छ वेधशाला, पानी र पानी अन्तर्गत गतिविधिहरु, सेतो बालुवा र क्रिस्टल सफा पानी संग एक सुन्दर निजी समुद्र तट को उपयोग सूर्य लाउन्जर र छाताहरु, ताडको रूखहरु र निजी सेवा डु by्गामा रिसोर्टबाट केवल १० मिनेट पछि, खाना खाने सम्भावना जहाँ तपाईं घर बाहिर वा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। टेरेस, समुद्र तट, रेस्टुरेन्ट वा उत्तम Treepod भोजन: Treetop मा डिनर!
वाडी रम मरुभूमि रिसोर्ट
यो रिसोर्ट डिजाइन चरण मा छ तर मैले यसलाई समावेश गरेको छु किनकि मलाई लाग्छ यो शानदार छ किनकि यो ठाउँ निर्माण गर्ने योजना भएकोले र यसको डिजाइनको कारण। यो चन्द्रमामा एक होटल जस्तो देखिन्छ, यो सत्य होइन?
वाडी रम यो को नामबाट पनि चिनिन्छ चन्द्रमाको उपत्यका र यो एक उपत्यका हो जुन عقबाको 60० किलोमिटर पूर्वमा छ, जोर्डन मा। ग्रेनाइट र चूना ढुstone्गाको साथ यो देशको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका हो र हजारौं बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको छ। केही चलचित्रहरू यहाँ चित्रित गरिएका छन् लारेन्स अफ अरेबिया, रेड प्लेनेट, ट्रान्सफार्मर र प्रोमिथियसबाट आएको भनेर चिनिन्छ। यसको परिदृश्य शानदार छन त्यसैले तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो होटेल कत्ति राम्रो हुन सक्छ।
चुनौती महान छ, मरुभूमि र चट्टानको साथ यसको बालुवालाई मिलाएर मानिस र प्रकृति बीच एक नयाँ सृष्टि आकार। वास्तुकारहरूको विचार भनेको उपत्यकाले प्रदान गर्ने र मानव आवश्यकताहरूको बीचमा सिम्फनी उत्पन्न गर्ने हो, प्रकृति अनुसरण गर्नुहोस् जब सम्भव भए कमसे कम सम्भावित प्रभाव उत्पन्न गर्दछ। निर्माण चट्टानहरूमा हुनेछ किनकि विचार मरुभूमिको दृश्यलाई बुझ्ने हो।
जटिल हुनेछ कोठा र निवासहरू, एक स्पा, एक लक्जरी शपिंग परिसर, पालहरू जुन तपाईंलाई वरपरको वातावरण, प्राकृतिक भेन्टिलेसन र अतिथिहरूका लागि आरामदायी माइक्रोक्लीमेट सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने सबै कुराको प्रशंसा गर्न अनुमति दिन्छ। ओपेनहाइम स्टुडियो चार्जमा छ र छविहरू हेरेर हेरे पछि मलाई यो लाग्छ कि यो एकदमै राम्रो होटेल, उदाहरणका लागि मंगलवार कुन ठाउँमा बस्न सकिन्छ भन्ने कुराको नमूना। तपाईं यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » आवास »3पारिस्थितिक र लक्जरी रिसोर्टहरू